Soojiidashada Sare ee Soosaarka Korantada Soo Saara Koronto
Bogga ugu weyn / Qalabka korontada ee korontada / Induction Kuleylka Kuleylka
Induction Isugeynta Awoodda Korantada
Category: Qalabka korontada ee korontada Tags: koronto badan oo soo noqnoqda, matoor kuleylka dhalinta, Awoodda kuleylinta kuleylka, korontada kululaynta induction, bixinta korontada
HLQ Mashiinka Kuleylka Kuleyliyaha wuxuu soo saaraa noocyo kala duwan oo ah sahayda tamarta dabka qaboojinta oo ay ka mid yihiin taxanaha korantada ee korantada, taxanaha korantada qadadka, kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka, kuleylka, boodhka, boodhka, dhajinta, alxanka, adkaynta iyo kululaynta daaweynta dalabka iyo bedelka.
Qalabka IGBT iyo tiknoolajiyada rogista jilicsanaanta ayaa ah sida soo saarista koronto-dhaliye, kalsooni sarre ayaa la sameyn karaa.
Yar iyo la qaadi karo, marka la barbar dhigo mishiinka koontaroolada SCR oo keliya goobta shaqada 1 / 10 ayaa loo baahan yahay. Waxtarka sare ee keydinta tamarta, waxtarka sarreeya iyo awooda faraha badan waa la sii wadi karaa
Matoor-dhaliyaha waa mid la jaanqaadi kara inta jeer ee laga soo bilaabo 1KHz ilaa 2.0MHz, rakibidda waxaa loo samayn karaa si aad u fudud sida ku qoran buug-gacmeedkayaga.
100% wareega shaqada, awood shaqo joogto ah oo awood leh.
Awoodda joogtada ah ama habka xakamaynta tamarta.
Muujinta awoodda soo saarida, soo-saarka soo-saarka, iyo korontada soo-saarka.
Qalabka tamarta korontada ee KGPS
300KW Muuqaal dhexdhexaad ah IGBT induction induction kuleylka tamarta